काठमाडौंमा आठ हजारमै सुविधासम्पन्न फ्ल्याट ! २४ सै घण्टा पानी आउने, अट्याच किचन र बाथरुम
ARCHIVE, विशेष » काठमाडौंमा आठ हजारमै सुविधासम्पन्न फ्ल्याट ! २४ सै घण्टा पानी आउने, अट्याच किचन र बाथरुम
काठमाडौं - एउटा उखाननै छ, 'बरु अम्बाको बोटमा केरा पाइन्छ, काठमाडौँमा डेरा पाईदैन ।' तर अव यो समस्याबाट मुक्त हुन गाह्रो छैन । राजधानीको महंगीले एउटा कोठाको भाडा मासिक ३००० देखि ४५०० सम्म पुर्याईसक्यो । तर अव चिन्ता लिनु नपर्ने भएको छ । रत्नपार्कबाट मात्र ९ किलोमिटरको दुरीमा रहेको कीर्तिपुरमा अहिले पनि दुर्इ हजारमै राम्रो कोठा पाइन्छ भने फल्याट ८ हजार रुपैयाँसम्मै पाउन सकिन्छ ।
झनै सस्तो छ परिवारसहित बस्नेलाई :
कामकाजीलार्इ कीर्तिपुरको भत्केपाटीमा फ्ल्याट झन सस्तोमा मिल्छ । तीन कोठाको फल्याट साढे ६ हजार रुपैयाँमै पाइने गरेको छ । सुबिधासम्पन्न फ्ल्याट ८ हजारसम्ममा पाइन्छ । २४ सै घण्टा पानी आउने, अट्याच किचन र बाथरुम भएको फल्याट ८ हजारमै उपलब्ध छ यहाँ ।
तस्विर : पहिलो पोस्ट
प्रकाशित : Tuesday, August 09, 2016
Tags : ARCHIVE, विशेष